UCarrie Lam ufunga ukugcina imeko yaseHong Kong njengendawo yokuhamba ngenqwelomoya, indawo yokusebenza
UMlawuli oyiNtloko weSithili sase-China saseHong Kong soLawulo olukhethekileyo (HKSAR) uCarrie Lam uthe ngoMvulo urhulumente we-HKSAR uzibophelele ekugcineni isikhundla saseHong Kong njengeziko lokuhamba ngenqwelomoya, indawo yezolwandle yamazwe aphesheya kunye nendawo yokuhanjiswa kwempahla kwingingqi. U-Lam wenze intsalela ...
Iinqwelo-moya zaseMelika ziye zasebenzisa abasebenzi abangama-25,000 ngo-Okthobha
I-American Airlines ukuya kubasebenzi abangama-25,000 ngo-Okthobha i-American Airlines izakukhupha izaziso kubasebenzi abangama-25,000 ukuba bajongane nemikhosi enokubakho ngo-Okthobha u-1. Ukuhlangulwa komdibaniso kwishishini leenqwelomoya, eliza kuphakanyiswa ngo-Okthobha u-1, ...
Yintoni i3pl kwaye izalisekisa njani iiodolo?
Nokuba ungumrhwebi we-e-commerce kunye nomnini-shishini obuyimbuyekezo, xa uthatha isigqibo sokuqalisa, ukuzaliseka komyalelo yinxalenye yeshishini lakho. Njengoko umsebenzi wakho uqhubeka, ngokuthe ngcembe ukufumanisa kunzima ukujongana nomsebenzi wokuzaliseka kwendlu kwaye ukhetha ukuchitha ixesha elininzi ...